Filtrer les éléments par date : mardi, 03 septembre 2019
mardi, 03 septembre 2019 22:45
« Energies 2019 »: Norombahan’ny mpianatra malagasy ny loka voalohany
Voaporofo indray teto amin’ny « Energies 2019 », izay fifaninanana mikasika ny tetikasa momba ny angovo aty amin’ny ranomasina indianina, fa mahay ny tanora Malagasy. Nisongadina ary nibata ny loka voalohany ny mpianatry ny lycée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana – Antananarivo Avaradrano tamin’ny alalan’ny tetikasa "Biogaz" ao amin’ny sekoly ianaran’izy ireo.
Tatsy amin'ny nosy Maorisy no natao ity fifaninanana amin'ny famokarana angovo ity, izay natokana ho an'ireo mpianatra amin’ny Lycée. Ny Vaomieran’ny ranomasina indianina (COI) sy ny tambazotra Eco-Schools Océan Indien no nikarakara ny fifaninanana.
mardi, 03 septembre 2019 22:42
Mpanao hitsin-dalana amin’ny seranam-piaramanidina: Olona miisa fito nampidirina am-ponja
Nohamafisina ny fandraisana andraikitra sy ny fanamafisana fa voarara ny manao hitsin-dalana eto amin'ny « piste », na faritra fipetrahana sy fiaingan’ny fiaramanidina eto Sambava, fa saropady ary mampidi-doza. Olona miisa fito no efa nampidirina am-ponja, izay tsy noraisina ho sazy fa mba ho anatra ho azy ireo sy ho an’ny hafa izay mety mbola ho manana fikasana hanao hitsin-dalana eo. Dimy tamin'ireo fito dia zandary no nahasambotra azy, ny roa kosa voasambotry ny polisy.
Mety mitarika fanakatonana ny seranam-piaramanidina ny tsy fahafehezana ny fisorohana ny loza, izay mety avy amin’ny tsy fitandreman’ny sasany toy itony mpanao hitsin-dalana itony.
mardi, 03 septembre 2019 22:24
CISCO Toamasina I: Nidina ny taham-pahafahana CEPE
83% ny taham-pahafahana CEPE tato amin’ny CISCO Toamasina I tamin’iny taom-pianarana vao nivalona iny. Nisy fidinany io raha oharina ny tamin’ny taon-dasa, izay 88% teo. Tsy mbola voazava kosa hatreto ny anton’io fidinana io.
Amin’ny alakamisy 5 septambra izao no hivoaka ny vokatry ny fifaninanana hidirana taona faha-6 (6ème) eto amin'ny CISCO Toamasina I.
mardi, 03 septembre 2019 22:15
Fanambaram-pananana: Andriamanalinarivo Raymond Michel Jocelyn no nisantatra ny an’ireo solombavambahoaka
Tonga nametraka ny fanambaram-pananany teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny solombavambahoaka Andriamanalinarivo Raymond Michel Jocelyn, voafidy tao Antananarivo I. Ny 30 aogositra 2019 no voarakitra ao amin’ny firaketan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny mombamomba izany.
Ny Lalampanorenana, amin’ny andininy faha-40 sy faha-41 no manery ny tomponandraiki-panjakana sy mpikambana amin’ny andrimpanjakana hanao fanambaram-pananana mialoha ny hanatanterahany ny asany. Sokajy voakasin’ireo andiny amin’ny Lalampanorenana ny filohan’ny Repoblika sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta, ireo solombavambahoaka sy loholona, ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, ireo mpitsara.
mardi, 03 septembre 2019 22:01
HAFARI: Exode urbain
Notontosaina teny amin'ny ESPACE ANJARA TIAVINA Anosizato ny famelabelarana arahina adihevitra mahakasikia ny vina "Exode urbain", na ny fifindramonina avy aty an-tanandehibe mankeny ambanivohitra, izay niarahana tamin'ny HAFARI Malagasy notronin'ny solotenan'ny fiadidiana ny Repoblika.
mardi, 03 septembre 2019 21:55
Antsirabe: Olana hatrany ny tsy fananan’ny tanàna fiara mpamonjy voina
Nitrangana haintrano tao Talata Andraikiba ny alin'ny alahady 01 septambra 2019, tokony ho tamin'ny 1 ora sy sasany maraina. Tsy voamarin'ny olona mazava ny niandohan’ny afo, saingy vetivety dia nihitatra ary tsy voafehy.
Nahazo ny andrinjiron'ny Jirama ny afo ka voatery notapahina avy hatrany ny jiro tamin’io.
Voaresaka teto indray ny olana amin’ny tsy fisian’ny fiara mpamonjy voina an’ny tanànan’Antsirabe, renivohitr’i Vakinankaratra. Betsaka ny fampanantenana efa ren’ny Vahoaka fa mijanona ho ambatobevohoka izany hatreto.
mardi, 03 septembre 2019 21:48
Foara « Renala » : Hotanterahina ny 26-27-28 septambra 2019 ny andiany faha-05
Hatao eto Morondava renivohitry ny faritra Menabe ny 26-27-28 septambra 2019 ny Foara « Renala », izay tsenabe ara-toekarena, sosialy sy kolotoraly. Andiany faha-05 ny amin’ity taona ity, hanehoana ireo vokatra sy ireo kolontsaina ato amin'ny faritra Menabe, izay handraisan'ireo Distrika dimy anjara.
Natao hisarihana mpamatsy vola ho avy aty amin'ny Faritra Menabe ihany koa ity foara « Renala » ity.
mardi, 03 septembre 2019 21:47
Fanambaram-pananana: Tsy mbola nisy nanatanteraka ny azy ireo mambra ny governemanta
Ny Lalampanorenana, amin’ny andininy faha-40 sy faha-41 no manery ireo mpikambana amin’ny andrimpanjakana hanao fanambaram-pananana mialoha ny hanatanterahany ny asany. Sokajy voakasin’ireo andiny amin’ny Lalampanorenana ireo ny filohan’ny Repoblika sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta, ireo solombavambahoaka sy loholona, ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, ireo mpitsara.
Misy koa ireo sokajy voakasiky ny lalàna 2016-020 tamin’ny 22 aogositra 2016 mikasika ny ady amin’ny kolikoly, tsy maintsy manao fanambaram-pananana.